Abaculi ababili bahlongoza ukukhiqiza yonke inhlanganisela yomculo futhi babanikeze amalayisense ngaphansi kweCC0 | Kusuka kuLinux
UDamien Riehl (ummeli, umdidiyeli wohlelo nomculi) kanti uNowa Rubin usanda kuthola iqhinga lokumisa ukumangalelwa okuzayo yokwephulwa kwe-copyright ehlobene nomculo kukopiwe futhi banikela ngendlela yokukhipha imiculo.
Abaculi phakamisa ukudala yonke inhlanganisela engenzeka izingoma ezivela kumanothi ayisishiyagalombili nezigqi eziyishumi nambili zisebenzisa i-algorithm, ukurekhoda ngayinye yazo ngefomethi ye-MIDI. Laba baculi bobabili balwela ukubeka le mikhiqizo okwenziwe kanjalo ngaphansi kwelayisense yamahhala ye-Creative Commons Zero. Umqondo ukuvimbela abasebenzisi bemisebenzi evikelekile ekungenelweni ngokungazi ngokuthathelwa izinyathelo zomthetho.
I-algorithm embuzweni, ikhodi yakhe yomthombo engakashicilelwa yilaba baculi, ukwazile ukukhiqiza izingoma ezingama-300,000 ngomzuzwana futhi umphumela wokugcina uqukethe irekhodi lezingoma eziyizinkulungwane ezingama-68,7 ezigcinwe ngefomethi ye-MIDI.
Ngakho-ke, zanyatheliswa ezinqolobaneni ezimbili ezinkulu, ngayinye enesisindo esingaphezudlwana kuka-600 GB kusayithi le-rigveve.org.
Amanothi omculo aguqulwa abe uchungechunge lwezinombolo, okwenza kube lula konjiniyela ukubhala i-algorithm. Eqinisweni, kwanele ukuthi owokugcina asebenzise indlela efanayo naleyo esetshenziswa abaduni ukuzama yonke inhlanganisela yezintambo zezinhlamvu ukuthola iphasiwedi.
Kodwa-ke, kufanele kwaziwe ukuthi izinto ezisetshenziswe yilaba baculi ababili, kuze kube manje, ziyangabazeka.
Isibonelo, amanothi acatshangelwe anqunyelwe kulawo angama-diatonic ngezinga elikhulu, okungukuthi, ngaphandle kokubheka okubukhali (noma okuyisicaba): kulokhu, amanothi asetshenzisiwe ukuhlanganisa amanothi ayishumi nambili esikalini se-chromatic.
Futhi, i-algorithm yeRiehl neRubin ikhawulelwe ku-octave eyodwakuyilapho umculo wengoma uvame ukwedlula ama-octave amabili, noma amathathu. Kukhona nezizathu zokucabanga, hhayi kuphela ngesikhathi sokudlala inothi ngalinye, kepha futhi nangesikhathi esinikezelwe ukuthula. Abaculi nabadwebi bayavuma, empeleni, ukuthi lezi zinto ezimbalwa zingashintsha kakhulu futhi kakhulu izinhlamvu zomculo,
Nokho, Abasebenzisi abaningi be-intanethi abazibonakalisile ngale ndaba bayangabaza, ikakhulukazi ngokungabi bikho kokucatshangelwa okungenziwa ngamajaji emisebenzini ekhiqizwe ngobuhlakani bokufakelwa. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi eminye imiculo eyenziwe yile nqubo isivele ivikelekile ngabanye ababhali abazidalile ekuqaleni.
Nokho, kufanele kuthiwe le phrojekthi kwenziwa nguRiehl noRubin kwakha isinyathelo okungahle kuvule indlela yezinye izindlela zokuphenya nokuhlola. Lokhu mhlawumbe kufaka phakathi ukubhala kabusha i-algorithm.
Eqinisweni, ukuphawula okuningi kuncoma lolu hlelo olungaphumelela ekuqoqeni iminikelo eqinile evela kumthuthukisi nomphakathi womculo.
Kukhona, ngokwesibonelo, labo asebevele bahlongoze amakhodi wokukhiqiza isihloko ngasinye sezigidi zemiculo ekhiqizwayo, ngeDiceware, indlela yokwakha imisho engahleliwe. Laba baculi bobabili banethemba lokuthi nabanye ababambe iqhaza bazokwandisa umkhakha ohlanganiswe yile phrojekthi baye kwezinye izindawo ngaphandle komculo we-pop.
Abaqali ababili bale phrojekthi bakhumbula, kwinhlolokhono, ukuthi izinkinga ezihlobene nokukopelwa komsebenzi womculo zivamile, ezingathinta ngokungafanele abaculi nabaculi.
Amacala abangelwa yimvamisa abiza kakhulu umculo womhlaba, okungahle kube nengozi yokusebenzisa imali phakathi kuka- $ 380,000 kuya ku- $ 2 million, ukuthola imali yabameli kuphela.
Futhi, izinhlawulo okufanele zikhokhwe uma kwenzeka ijaji likubona ukukopela kwesinye isikhathi liphezulu kakhulu.
Kulesi simo ngokwesibonelo, icala, ehlobo lika-2019, mayelana nengoma eyashisa izikhotha ethi "Amahhashi Amnyama" kaKaty Perry, manje ophoqeleke ukuthi akhokhe u- $ 2.78 million, ngoba ingoma okukhulunywa ngayo izofana nengoma yobuKrestu nge-rap ebhalwe nguMarcus Grey ebizwa nge- "Joyful Noise".
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Abaculi ababili bahlongoza ukukhiqiza yonke inhlanganisela yomculo futhi babanikeze amalayisense ngaphansi kweCC0